I-PVC eguqukayo yeNaliti
I-PVC eguqukayo yokuGxothwa
PVC ziqinile Kuba Inaliti
I-PVC eqinileyo yokuSuswa
PVC Ca-Zn uzinze
I-PVC enye yePack Stabilizer
Yintoni i-Polyvinyl chloride kwaye isetyenziselwa ntoni?
ngomphathi ku 21-09-01
IPolyvinyl Chloride (i-PVC) yipolymer eyenziwe ngohlobo lwe-thermoplastic polymer kunye neplastiki yesithathu eveliswa kakhulu. Ezi zinto zaziswa kuqala kwintengiso ngo-1872, kwaye inembali ende yempumelelo kwizicelo ezininzi. I-PVC ibonakala kuluhlu olubanzi, kubandakanya nomzi mveliso wezihlangu, c ...
Zenziwe ngantoni iiGumboots?
ngomphathi ku 21-06-21
Ukuba ufikile kweli phepha, mhlawumbi uyazi ukuba zeziphi iigumboots kunye nemfuno ekumgangatho ophezulu, iibhutsi ezingangeni manzi. Kodwa, uyekile ukucinga, zeziphi iibhutsi zemvula ezenziwe ngazo? Ewe, iibhutsi ezininzi ezingangeni manzi zenziwe ngerabha yendalo okanye nge-polyvinyl chlor ...
Izibonelelo ezi-4 eziphambili zokusebenzisa i-PVC kwiLizwe leMveliso yezihlangu
Ihlabathi loyilo lwezihlangu kunye nemveliso liphuhlile kakhulu kwiinkulungwane ezimbini ezidlulileyo. Zimnkile iintsuku zokuba kubekho umntu osebenza ngesikhotha esinye kwidolophu iphela. Ukushishina kwamashishini kuzise utshintsho oluninzi, ukusuka kwindlela ezenziwe ngayo izihlangu ...
Izinto ezifanelekileyo zoShishino lweFOOTWEAR
Umzi mveliso wezihlangu ufuna izixhobo ezinokumelana noomatshini okuphezulu, ukusebenza ngokukuko, ubuchule kunye nokubonakala okuphezulu. Iikhompawundi PVC yenzelwe ukuhlangabezana nezi mfuno. Ukuqulunqwa kweekhompyuter zePV kuyahambelana ...
Okwesihlandlo sokuqala i-PVC yafunyanwa ngengozi ngo-1872 yi-chemist waseJamani, u-Eugen Baumann. Yayidibene njengeflask ye-vinyl chloride eyasala ibhencekile elangeni apho yayipolishwa khona. Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800 iqela ...
Inaliti, extrusion kunye nokuBumbela ukubumbela
I-PVC ethambileyo yokuGxothwa
I-PVC ethambileyo yenaliti